FLV in MP3, Waraaqda MP3 ka FLV video files
> Resource > Music > Gacan-ku-FLV in MP3 Converter Macdan MP3 ka FLV
Gacan-ku-FLV in MP3 Converter Macdan MP3 ka FLV
Waa in ay jiraan qaar ka mid ah videos music cajiib ah lagala soo bixi internet ka on your computer haddii aad ku dhacay taageere music ah. Oo FLV noqonaya mid aad iyo aad u badan oo caan ah online, videos, kuwaas oo music (noocyada kale ee ka mid ah videos) ay u badan tahay in ay la soo bixi sida FLV gudbiyo gaar ahaan oo ku beegnaa iyaga ka hesho YouTube. In kastoo kulul online, FLV ma qabtaan online sida kulul markii offline, sida, FLV videos waa loo tirinayay ciyaartoyda labada warbaahinta caanka ah oo ay ka mid QuickTime, Windows Media Player iyo kombuyuutarrada gacanta sida iPhone, iPod, iPad, Zune iwm, taas oo keenta aad leedahay si loogu badalo FLV in qaab kale oo la isku hallayn karo oo ay aad app ama qalab.
Qaado play videos music FLV on iPod, tusaale ahaan, tan iyo iPod kaliya taageeraa qaar ka mid ah qaabab file gaar ah sida MP3, MOV, MP4, M4V iwm, markaas ka dib waxaad u baahan tahay in loogu badalo FLV in MP3 ama dadka kale. Wareejinta ma aha wax adag, heshiis, waxay noqon kartaa mid aad u fudud haddii aad leedahay mid caawisa oo ku wanaagsan sida xirfadle video Converter . Tani waxay halkan article muu ku tuso sida loo badalo FLV in MP3 labada on PC iyo Mac si aad u dhegeysan kartaa muusikada ku iPod ama ciyaaryahan MP3 fudayd. Waxa uu isticmaalaa awood Video Converter suuragelinayo si loogu badalo videos iyo Cajalado dhammaan qaabab loo jecel yahay.
Ka FLV videos on PC Waraaqda MP3
1. Burcad FLV in ay MP3 Converter oo ku darto files
Waxaad si toos ah jiidi karaan jeedi videos FLV in software ama guji "Add Files" button on sare ee interface ugu weyn ee FLV ee barnaamijka MP3. Waxa ay taageertaa diinta Dufcaddii oo badbaadin kartaa waqti aad si weyn.
2. Set MP3 format sida wax soo saarka aad: furo liiska qaabka iyo dooran MP3 sida u qabo qaybta Audio sida qaab wax soo saarka aad.
3. Start si loogu badalo FLV in MP3 adigoo riixaya "Beddelaan" button.
Beddelaan FLV in MP3 ee Mac
Waxaa la mid ah la FLV in ay diinta ka MP3 in Windows inay sidaa sameeyaan in Mac, waxaad u baahan tahay download a Converter Video for Mac inuu ahaado qoyskaaga ku xigeenka. Ka dib markii la rakibey, waxa maamula.
1. Hel aad videos galay FLV in ay app MP3 Mac: straightforwardly jiidi & jeedi videos galay codsiga ama madaxa si "File" oo xulo "Load Media Files".
2. Dooro MP3 format in ay wax soo saarka.
3. Riix Beddelaan si loogu badalo FLV in MP3 Mac.
Fiiro gaar ah: Labada software, waxaad tidhaahdaan, Video badalo iyo Video Converter u Mac , wixii intaa siisa qaar ka mid ah hawlaha edit waxtar leh, waayo, waxaad si kor loogu qaado tayada faylka. Si aad u ogaatid faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hawlaha ay, waxaad tagi kartaa bogagga sheyga.
Sida loo isticmaalo deezer app for iPhone / Android
Sida loo Download Music si toos ah iPhone
Best Music Downloader (Free iyo mushaarka 2015) ee Devices